Barnaamijyada Shahaadada Jaamacadeed »Jaamacadda Hodges - Ogolaanshaha
Categories: Shahaadooyinka Jaamacadeed
Ka bilow Shahaadadaada Shahaadada Jaamacadeed ee Jaamacadda Hodges
Shahaadooyinka shahaadada koowaad ee Jaamacadda Hodges waxaa loogu talagalay inay ku siiso koorsooyin gaar u ah warshadaha loo baahan yahay si loo dhiso xirfadahaaga iyadoo laga gudbayo buundooyinka asaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah lamaanaha ama shahaadada bachelorka. Intaa waxaa sii dheer, shahaadooyinkeenna waxaa lagu bixiyaa 100% khadka tooska ah waxayna kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh ugu dhex socoto barnaamijka iyadoo la siinayo aasaaska loo baahan yahay si loogu guuleysto xirfaddaada xulashada. Waxaan ku bixinnaa shahaadooyinka shahaadada koowaad:
Business (Xisaabinta, Maareynta Khatarta, Diyaarinta Canshuuraha)
Tiknolojiyadda Naqshadeynta (Animation, AutoCAD, Naqshadeynta Sawirka, iyo Khibradda Isticmaalaha / Naqshadeynta Webka)
Teknolojiyada Ganacsiga (eBusiness Software, eDiscovery / eLitigation, eBusiness Ventures)
Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka (Caawinta Miiska Taageerada, Taageerada Teknolojiyada Macluumaadka, Xiriirinta Kumbuyuutarka)
Shahaadooyinkani sidoo kale waa kuwo deyn qaadis ah, sidaa darteed haddii aad go'aansato inaad rabto inaad dhammayso shahaadadaada, waxaad awoodi doontaa inaad ku dalbato dhibco xagga shahaadadaada ama shahaadadaada bachelor-ka taariikhda mustaqbalka.
La xiriir Lataliyaha Ogolaanshaha si looga hadlo ikhtiyaarada maalgelinta. Shahaadooyinka qaarkood waa Core + 4 ayaa uqalma (meesha aad iska qori karto waqti buuxa, adoo qaadanaya 16 saacadood oo deyn ah qiimaha 12), Cinwaanka IV xaq u leh, ama ku habboon deeqaha waxbarasho.
Codso maanta, oo aan kaa caawinno inaad hesho xirfadaha aad ugu baahan tahay inaad ku kobcaan!
Shahaadooyinka Ganacsiga - Cusub
Ku soo dhowow Shahaadooyinka Ganacsiga ee Jaamacadda Hodges. Shahaadooyinkeenna Ganacsi waa kuwo ku habboon haddii aad rabto fasallada gaarka u ah warshadaha ee loo baahan yahay si loo dhiso xirfadahaaga iyadoo laga gudbayo buundooyinka asaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah isku-xidhka ama shahaadada bachelor-ka.
Shahaadooyinkayaga Ganacsi waxaa lagu bixiyaa 100% khadka tooska ah, si dhakhso ah ayaa loo dhammaystiri karaa, wuxuuna kuu diyaarin karaa xirfadaha iyo aqoonta aad ugu baahan tahay inaad u fariisato imtixaannada shahaado la xiriira warshadaha. Si aan uga dhigno shahaadooyinkeena kuwo la awoodi karo, waxaan kuu soo bandhigeynaa barnaamijkeena CORE + 4 oo aad iska qori karto waqti buuxa, adiga oo qaadaneyna 16 saacadood oo deyn ah oo ah qiimaha 12. Waxaa intaa dheer, waxaad xaq u yeelan kartaa maalgelinta Title IV
Aynu kaa caawinno inaad bilowdo maanta!
Shahaadada Xisaabinta waxaa loogu talagalay kuwa doonaya jagooyinka heer-bilow ah sida buug-yare ama doonaya inay ka shaqeeyaan awood iskeed u shaqeysa oo u adeegta ganacsiyo kala duwan oo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah. Taxanaha koorsada sidoo kale wuxuu buuxiyaa shuruudaha waxbarasho ee Ururka Qaranka ee Hubinta Buugaagta Dadweynaha (NACBP) oo ardayda u diyaariya Shahaadada Buuggaagta Dadweynaha (CPB) imtixaanka shatiyeynta, aqoonsiga qaran ahaan laga aqoonsan yahay.
Koorsada loogu talagalay barnaamijkeena xisaabinta waxaa ka mid ah:
Hordhaca xisaabaadka Maaliyadda iyo Maareynta
Shahaadadani waa qayb ka mid ah barnaamijkeena CORE + 4 oo aad isdiiwaangelin karto wakhti buuxa, adoo qaadanaya 16 saacadood oo deyn ah oo ah qiimaha 12. Dhammaan koorsooyinka loo baahan yahay waxaa lagu bixiyaa 100% Online qaab TEC ah, taas oo ku siinaysa dabacsanaan aad ku baran karto waqtigaaga , xawaarahaaga.
Shahaadada Maareynta Khatarta waa shahaado deyn qaadasho oo loogu talagalay adiga inaad ku kasbato asalka guud ee maaraynta halista iyo caymiska. Xirfadaha aad baraneyso ayaa si guud loogu dabaqi karaa boosaska shirkadaha caymiska iyo adeegyada dhaqaalaha.
Shahaadada Maareynta Khatarta waxaa ku jira fasalo:
Maaliyad Shakhsiyeed iyo Caymis
Caymiska Hantida Shakhsiyeed iyo Ganacsi
Intaa waxaa sii dheer, dhibcaha lagu kasbaday shahaadadan ayaa si buuxda loogu wareejin karaa barnaamijka Associate ama Bachelor-ka ee shahaadada ganacsiga ee Dugsiga Ganacsiga ee Johnson. Kasbashada shahaadadan oo ay weheliso shahaadadu waxay la kulmi kartaa shuruudaha waxbarasho ee Gobolka Florida ee Shatiga Wakiilka Caafimaadka iyo Nolosha Degaanka (eeg URLka soo socda)
Shahaadada Diyaarinta Canshuuraha waxaa loogu talagalay kuwa xiiseynaya jagooyinka heerka gelitaanka sida diyaarinta canshuuraha shaqsiyaadka ama faylalka canshuurta ganacsiyada yaryar, ama kuwa doonaya iskaa-u-shaqeysiinta inay u adeegaan shirkado kala duwan oo yar yar iyo kuwa dhexdhexaad ah. Barnaamijkani wuxuu buuxiyaa shuruudaha waxbarasho ee Adeegga Dakhliga Gudaha (IRS) oo ardayda u diyaariya Imtixaanka Diiwaangelinta Gaarka ah (SEE) ayaa looga baahan yahay inuu noqdo Wakiilka Diiwaangashan ee IRS. Wakiilka Diiwaangashan waa xirfad yaqaan canshuur oo u diyaariya canshuur celinta shaqsiyaadka iyo canshuur bixiyaasha ganacsiga wuuna matali karaa canshuur bixiyeyaashan kahor IRS.
Koorsada Shahaadada Diyaarinta Canshuuraha waxaa ka mid ah:
Canshuuraha Dakhliga Shaqsiyeed
Xisaabinta Canshuuraha Federaalka I iyo II
Shahaadooyinka Teknolojiyada Naqshadeynta
UX / Naqshadeynta Webka
Shahaadadan waxaa loogu talagalay inay u diyaariso ardayda heerarka gelitaanka sidii Naqshadeeyayaasha Animation-ka ee ka shaqeynaya sawirrada dhaqdhaqaaqa dhererka gaaban sida ganacsi, banner animated, sawir gacmeedyo loogu talagalay naqshad degel websaydh ah, ama animations dherer gaaban oo bandhigyo ah. Waxaan u isticmaalnaa lambar kasta oo ah 20 oo lagu daray Adobe Creative Cloud codsiyada si loo abuuro mashruuca ugu dambeeya.
Tusaalooyinka mashaariicda qaarkood ee aad qaadi karto:
Isticmaal Animate, XD, iyo Dreamweaver si aad ugu abuurto degello xirfadlayaal ah ganacsiyada maxalliga ah.
U adeegso Adobe Premiere iyo Aftereffects si aad u sameysid aflaan gaagaaban oo aan faa'iido doon ahayn.
U adeegso Adobe Photoshop, Sawirqaade, iyo Indesign si aad ugu abuurto magac-bixinno tiro mashruuc shaqsiyadeed ah.
At kaliya 9 saacadaha deynta, waxaad awoodi kartaa inaad ku buuxiso shahaadadan wax ka yar hal sano!
Shahaadada 'AutoCAD Shahaadada' waxay u diyaarineysaa ardayda boosaska heerka gelitaanka sida farsamayaqaannada CAD. Hesho ogaanshaha sida aad ugu baahan tahay u shaqee sida 2D ama 3D Drafter oo ah qaab dhismeedka, injineernimada, dhismaha, ama warshadaha daryeelka caafimaadka. Dhibcaha ku soo ururay shahaadadan waxaa lagu dabaqi karaa jaamicad ama shahaadada koowaad ee jaamacadda Hodges.
Waxbarashada ku jirta Shahaadada Diyaarinta AutoCAD waxaa ku jira 2D iyo 3D kumbuyuutar garaaf iyo karti animation ah sida:
Sawiridda khadadka korantada
Sawiridda jaaliyadaha qorshaha guud
Sawiridda khariidada nidaamka macluumaadka juqraafiyeed
Sidoo kale waad awoodi kartaa ku dhammaystir shahaadadan wax ka yar sannad!
Soosaarida Naqshadeynta Sawirka
Shahaadadani waxay kuu diyaarinaysaa booska heer-gelitaan ahaan Madbacadda Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta iyadoo la adeegsanayo barnaamijyada asaasiga ah ee Adobe Creative Cloud (Photoshop, Sawirqaade, iyo Indesign) in la dhiso lana maareeyo nidaam sumadeyn ah. Intaa waxaa sii dheer, baro sida loo dalbado mabaadi'da saxda ah ee qaabeynta si wax ku ool ah loola xiriiro loona diro farriinta astaanta bilowga naqshadeynta dhijitaalka illaa wax soo saarka jirka.
Shahaadadan ayaa ah ku habboon kuwa doonaya inay aasaas u yeeshaan naqshadeynta garaafka dhijitaalka ah, iyaga oo aan qaadan manhajka aasaasiga ah ee looga baahan yahay shahaado. Mawduucyada laga hadlay waxaa ka mid ah:
Naqshadeynta Dijital ah ee Sawirka illaa Soo-saarista Xirfadeed
Horumarinta Fahamka Mabaadi'da Shabakadda
Sida loo mideeyo Mabda 'Grid-ka iyo Muuqaalaynta Muuqaalka
Soo saarista Foomamka Isgaarsiinta ee Waxtarka u leh Badeecad ama Adeeg
Shahaadadani waa 24 saacadood oo amaah ah waxaana laga yaabaa in la dhammaystiro illaa hal sano. Dhibcaha la kasbaday waxaa loo wareejin karaa shuraako ama shahaadada koowaad ee jaamacadda ee Hodges U.
Khibrada Isticmaalaha (UX) iyo Naqshadeynta Webka
Shahaadadani waxay isku dhafan tahay aasaaska koodhka iyo mabaadi'da naqshadeynta jawaab-celinta siligga ee guuleysta, oo ay weheliso fahamka sida fikraddaada looga soo nooleeyo sawir adag. Hesho casharro maadooyinka sida:
Animation Dijital ah iyo Saameynta Webka
Naqshadeynta Webka I, II, iyo III
Baro farsamooyinka naqshadeynta jawaabta adoo adeegsanaya codsiyada ugu badan ee hadda jira ee Warshadaha ku jira Adobe Creative Cloud, adigoon qaadan manhajka aasaasiga ah ee looga baahan yahay shahaado. Waxaad u baahan doontaa kombuyuutar iyo Rukunka Adobe CC barnaamijkan shahaadada gaarka ah. 21 saacadood oo deyn ah, shahaadadan waxaa lagu dhammaystiri karaa illaa hal sano. Marka si guul leh loo dhammeeyo, Shahaadada UX iyo Shabakadda Naqshadeynta Webka ayaa loo wareejin karaa shuraako ama bachelor degree ee Hodges U.
Shahaadooyinka Teknolojiyada Ganacsiga
E-Discovery / Dacwad
Shahaadadani waxay isku daraysaa naqshadeynta barnaamijka ku saleysan barnaamijka, hirgelinta, iyo horumarinta mobilada iyo dalabyada fikradaha injineernimada softiweerka, iyo aqoonta maaraynta mashruuca oo kugu diyaarinaysa aasaaska looga baahan yahay xirfad ku saabsan naqshadeynta iyo horumarinta software.
Shahaadadan ayaa ah ku habboon kuwa doonaya aqoonta iyaga oo aan qaadan manhajka aasaasiga ah ee looga baahan yahay shahaadada horumarinta barnaamijka. Koorsooyinka la daboolay waxaa ka mid ah:
Fikradaha barnaamijka Java iyo barnaamijyada
Shahaadadeena Ganacsi ee elektaroonigga ah ayaa laga yaabaa u diyaari ardayda qorsheynta, maamulida, kormeerka, iyo suuq geynta joogitaanka meheradda ee internetka adeegsiga xirfadaha lagu barto koorsooyinka sida:
Maareynta Ganacsiga Yaryar iyo Ganacsi
Baraha Bulshada iyo Wadashaqeynta
Barnaamijkani waa mid aad ufiican kuwa fiirinaya gaadho aqoonta looga baahan yahay xirfad suuq geyn dijitaal ah iyadoon la qaadan manhajka aasaasiga ah ee looga baahan yahay shahaado. 21 saacadood oo deyn ah, shahaadadan waxaa lagu dhammaystiri karaa qiyaastii hal sano, marka si guul leh loo dhammaystirona, waxaa loo wareejin karaa shuraako ama shahaadada bachelor-ka ee Hodges U.
Kani waa shahaado ugu fiican kuwa doonaya Fahmaan sharciyada ku lug leh sameynta ganacsi ee adduunyada elektaroonigga ah ee waligeed isbedeleysa. Koorsooyinka waxay ka kooban yihiin maadada sida:
Soo helitaanka elektarooniga ah
Asturnaanta Xogta iyo isticmaalka Baraha Bulshada
eFiling iyo eLitigation
Kaliya 15 saacadaha deynta, shahaadadan waxaa la qaadan karaa qiyaastii hal sano waxaana loo wareejin karaa Bachelor-ka ee Daraasaadka Sharciga (ama shahaadada kale ee bachelorka) ee Hodges U.
Shahaadooyinka Teknolojiyada Macluumaadka Kombuyuutarka
Khabiir isku xirka
Caawinta Miiska Taageerada
Shahaadada Taageerada Miiska Caawinta ayaa kufiican kuwa raadinaya booska heerka gelitaanka ee IT. Shahaadada ayaa isku dhafan horumarinta qalabka, nidaamyada hawlgalka, iyo isku xirka, iyadoo la adeegsanayo taageerada isticmaaleyaasha iyo caawinta qibradaha howlaha miiska si loo bilaabo ka shaqeynta qaybta Teknolojiyada Macluumaadka. Isla mar ahaantaana ku kasbato shahaadooyinkaaga warshadaha A + iyo Net + shahaadadaada. Koorsooyinka la daboolay waxaa ka mid ah:
A + Qalabka I iyo II
Diyaarinta A + Lab / Shahaadada
Shabakada CompTIA + Diyaarinta Shahaadada
Hawlgallada Taageerada Isticmaalaha iyo Miiska Caawinta
Isku xidhka waxyaabaha aasaasiga ah
Kaliya 18 saacadood oo deyn ah, shahaadadan waxaa lagu qaadan karaa wax ka yar hal sano waxaana loo wareejin karaa shahaadada jaamacadeed ama bachelor-ka ee Hodges U.
Taageerada Teknolojiyada Macluumaadka
Shahaadadani waxay kugula socodsiineysaa kartida looga baahan yahay jagooyinka heerka gelitaanka sida khabiirka taageerada IT-ga. Maadooyinka daraasadda sida:
Codsiyada Xafiiska Aasaasiga ah
Barnaamijkani waa mid aad ufiican kuwa fiirinaya aad ku kasbato aqoonta shahaadooyinka warshadaha ee A + iyo Net + isla mar ahaantaana shahaadadaada, adigoon qaadan manhajka aasaasiga ah ee looga baahan yahay shahaadada. Saacadaha 24-saacadaha amaahda, shahaadadan waxaa lagu dhammaystiri karaa illaa hal sano ka dib marka lagu guuleysto dhammaystirka waxaa loo wareejin karaa shahaadada koowaad ama bachelor-ka ee Hodges U.
Shahaadadani waxay ku dhisan tahay xirfadaha isku xirka aasaasiga ah si ay kuugu diyaariso jagooyin u baahan khibrad isku xirka takhasuska leh ee maamulka iyo ilaalinta deegaanno badan oo shabakad ah.
Shahaadada Takhasuska Isku-xidhka waa mid ku habboon kuwa doonaya inay ku kasbadaan shahaadooyinka warshadaha ee A +, Net +, CCENT, CCNA, Linux +, iyo seddex Windows Servers isla mar ahaantaa shahaadada, iyadoon la qaadan manhajka aasaasiga ah ee looga baahan yahay shahaadada. Koorsooyinka la daboolay waxaa ka mid ah:
A + Qalabka I iyo II oo leh Diyaarinta Shahaadada Sheybaarka
Ballaarinta iyo isku xirka Shabakadaha
Isku xirka Windows Server
Marinka & Wareejinta Muhiimka ah
Nidaamka Linux & Maamulka Amniga